Khuphela i-TouchWiz Launcher 4 V2 ye-Samsung Galaxy S | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukuba unayo i-Samsung Galaxy S, isekelwe kunye ne-clockworkMod yokubuyisela ukufakwaunethamsanqa, Ukusukela kwimowudi endikuzisela yona, uqinisekile ukuba uyayithanda.
Ukukhangela iiforamu ezingapheliyo ze xdedevelopers, ngequbuliso ndidibana nale ivuso ngokuchasene, i Isiqalisi seTouchWiz 4 V2, kwaye ngokungafaniyo nezinye iipakeji zemodyuli, le isebenza zombini Gingerbread, ICyanogenmod 7 e ICS esekwe kwi-ICS.
Njengoko ubonile kwividiyo kwi-header, le phakheji yokuguqula iya kuguqula i-terminal yethu, ifake ingxelo yokugqibela ye-Samsung ye-TouchWiz, nangona iguqulwe kwaye yaphuculwa.
1 Yongeze ukuphucula
2 Indlela yokufaka imodyuli
Olona phuculo longezelweyo koku Inguqulelo yesibini yeTouchWiz 4, kukudityaniswa, ngaphakathi kwedrawer yesicelo, ye ii icon ezintathu ezilinganayo, ezinika isiphumo kunye nokubamba okumangalisayo okufanelekileyo kwezona ndawo zininzi kunye neetheminali eziphambili.
Iziphumo ezinamacala amathathu zisenecala eliphantsi lokuba siza kusebenze ujikelezo lokuqalisa oluzenzekelayo, Iya kusinika impazamo, kuba ayixhasi ujikeleziso oluzenzekelayo.
Kwi-Dock sinethuba lokukhetha ukusuka kwiimpawu ezimbini ukuya kwezintlanuUkongeza, sinokutshintsha kwimenyu yokuseta yesiqalisi ngokwaso, zombini inani lee icon zeDock, ezinje ngegridi yedrowa yeapp, kunye nokukhetha i Uhlobo lokujonga idrowa.
Indlela yokufaka imodyuli
Ukufakela le mod oko kuya kunika umdla onomdla kwifowuni yethu, Kuya kufuneka sikhuphele ifayile ye-zip ehambelana nohlobo lwethu lwe-Android, nokuba Gingerbread, ICyanogenmod 7t ICS esekwe kwi-CM9.
Inguqulelo yemodeli yeGingerbread isebenza kuphela kwii-r-odexed roms, ke yithathele ingqalelo xa ukhetha ukuyifaka.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba ngaba i-rom yakho odexed o de-odexedKuya kufuneka ufake iifayile zenkqubo kunye nomhloli wefayile njenge root Explorer, ukuba kwifolda isixokelelwano ufumana ukongeza kwiifayile ngokwazo .apk Izicelo ezifakiweyo, ezinye iifayile ezinokongezwa .odex, le mod ayizukusebenzela wena.
Nje ukuba ifayile ehambelanayo nenguqulo yethu ikhutshelwe, siya kuyikopa ngaphandle kokucinezela kwingcambu ye-sdcard, siya kucima ifowuni kwaye siyivule imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo apho siza kwenza oku kulandelayo:
Phambili / susa i-dalvik cache2
Buyela umva ukubuyela ekuqaleni kokufumana kwakhona.
Faka i-zip kwi-sdcard.
Khetha i-zip kwi-sdcard yangaphakathi.
Sizulazula kwi-zip yeTouchWiz 4 v3 kwaye siqinisekisa ukufakwa kwayo.
Siyathemba ukuba iyaqala kwakhona kwaye ngoku Siza kuba neTouchWiz 4 v2 efakwe ngokuchanekileyo kunye nokusebenza ngokugqibeleleyo.
Khuphela - Gingerbread, ICyanogenmod 7, ICS CM9
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-MOD TouchWiz 4 Launcher v2 - GB, CM7, ICS ye-Samsung Galaxy S
enkosi ngengcebiso yakho.
Yeyiphi irom oyifakileyo? Ndine-CM9, kodwa ubomi bebhetri boyikeka. Ndithengile entsha kwaye andinakuyifumana ukuba ihlale ngaphezulu kweeyure ze-12-14 ngaphandle kokuyinxiba imini yonke.
I-touchwiz iyekile, ndingayenza njani ukuba iphinde isebenze?
Yiya kwimenyu yezicelo kwaye ucime idatha kunye ne-cache
Ubungakanani bokugqibela beFantasy, eyona ndima ifanelekileyo iza kwi-Android